Wondershare MobileTrans User Guide - Back Up Symbian ka PC
MobileTrans Guide: Ndabere Symbian ka PC
Nzọụkwụ 2. Pịa "ndabere gị ekwentị". Ị nwekwara ike ịhọrọ faịlụ ọnọdụ maka gị ndabere. Iji mee nke a; pịa menu na n'elu aka nri akuku na họrọ "ntọala". Wee pịa "ịchọgharị" iji họrọ otu ọnọdụ ma wee pịa "OK".
Nzọụkwụ 3. Jikọọ gị Symbian ngwaọrụ gị na kọmputa na iji USB cables. Jide n'aka na MobileTrans ghotara ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ 4. Lelee faịlụ na ụdị ị ga-achọ ndabere.
Nzọụkwụ 5. Pịa "Malite Nyefee" iji malite usoro. Na-na ekwentị gị jikọọ kọmputa gị site na dum usoro.
Ọzọ: Back Up WinPhone ka PC